Kwisiko yenkomo siko - China ngentando siko lanyard abavelisi kunye nababoneleli
Ngokwahlukileyo kwimisila yenkomo yemveli, ii-lanyards ezenziwe ngohlobo oluthile zitsala amehlo. Imisila yenkomo inokuveliswa ngokuqaqamba, ukongeza iirhinestones, okanye ukongeza abalinganiswa abathandayo. Ezi nkcenkce zingasetyenziswa kwiziganeko ezizodwa. Umzekelo, ukukhanya okuqaqambileyo kwenza ukuba imisila yenkomo ibonakale ebumnyameni, nesetyenziswa kakhulu ebusuku, kwiklabhu yasebusuku, njlnjl. I-logo iya kuba nomtsalane ngakumbi eboniswe ebumnyameni. Ukongeza ii-rhinestones okanye abalinganiswa abaxineneyo benza i-lanyard ngakumbi ifashoni. I-Rhinestones ibengezela phantsi kwelanga, amantombazana akhetha le nkcenkce. Imisila yenkomo iyathengiswa ngokushushu phantsi kwezi zinto zinemfashini. Ulutsha lukhetha kwezi nkcenkce kwaye luba luphawu lwefashoni. I-logo inokuthi iqulethwe kwiinkqubo ezininzi ezifana nokushicilelwa kwe-silkscreen, ukuhanjiswa kobushushu, ukwaluka kunye njl. Usenokudideka ukuba yeyiphi inkqubo esetyenziswayo ngokwee-lanyards zakho. Shiya le mibuzo kuthi, iqela lethu lobungcali lokuthengisa liya kubonelela ngeziphakamiso ezifanelekileyo, lingenzi nje uphawu lwentengiso kuphela, kodwa lukhuphisane nakumaxabiso. Yeka ukuthandabuza kwaye unxibelelane nathi kwangoko. IJian iya kuba ngumthengisi wakho wexesha elide nothembekileyo.
Silkscreen Ishicilelwe ipholiyesta yenkomo
Imisila yenkomo yokuprinta i-CMYK Offset
Ukuxelisa iNylon Lanyards
Lanyards eprintiweyo yeSatin
Ilogo ephothiweyo / Imisonto yenkomo
I-Eco-Friendly Biodegradable Lanyards
Imisila yenkomo ebonakalayo